By vijayafm on	 August 30, 2018 BREAKING NEWS, फोटो फिचर, विविध खबर, स्थानीय
भरतपुर-४ अद्वैत चोकमा कारले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा एक जना घाइते भएका छन् । भरतपुरबाट चनौलीतर्फ जाँदै गरेको बा. १२ च ७२८६ नम्बरको कारले धारापानी चोकबाट आन्नद चोक तर्फ जाँदै गरेको ना. ४८ प ५०१४ नम्बरको मोटरसाइकललाई बिहान १०:१५ बजे ठक्कर दिएको थियो ।
घाइते मोटरसाइकलमा सवार गोरखा घर भई फुर्ति चोक बस्ने हरि सापकोटाको अवस्था गम्भीर रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । कारले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिएर स्थानीय दुर्गा सापकोटाको घरमा पार्किङ गरेर राखिएको बा. १७ च ३१८५ नम्बरको कारलाई पनि ठक्कर दिएको छ । पछिल्लो दुई हप्तामा मात्रै अद्वैत चोकमा यो दोश्रो सडक दुर्घटना भएको हो ।